Myanmar Model, Moe Hay Ko Welcome Criticism - Myanmar Celebrity News | Gossip| Fashion| Entertainment| MyanmarCelebrity.com
Myanmar Model, Moe Hay Ko Welcome Criticism
Myanmar Super Model and Actress, Moe Hay Ko talked to Popular Journal that she does not receive any letter from her fans because Celebrity Magazines does not mention her current address. She also claimed that she wants to hear any criticism about her from her fans. Moe Hay Ko and her boyfriend, Nyi Nyi Tun have been falling in love with each other for three years now. Therefore, we may hear wedding news of Moe Hay Ko in 2010 because, at one interview, Moe Hay Ko said that she would marry with her boyfriend after3years of Lover-life. To Contact Moe Hay Ko : No 74 D, Thanlwin Street, Yangon.
ဝေဖန်သံတွေ ကြားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မိုးဟေကို
မဂ္ဂဇင်းတွေက သူမလိပ်စာကို မဖော်ပြကြတာမို့ ပရိတ်သတ်ဆီက စာတွေမလာဘူး၊ သူမလည်း ပရိသတ်ဆီက ဝေဖန်သံတွေ ကြားချင်ပါတယ်လို့ မိုးဟေကိုက ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်ကို ပြောပါတယ်။ မိုးဟေကိုရဲ့ လိပ်စာကတော့ အမှတ် 74 D၊ သံလွင်လမ်း၊ ရန်ကုန် ပါ။ ၂၀၁၀ မှာ မိုးဟေကိုနဲ့ ညီညီထွန်းတို့ ချစ်သူသက်တမ်း (၃) နှစ်ပြည့်ပြီမို့ ချစ်သူ သက်တမ်း (၃) နှစ်ပြည့်ရင် လက်ထပ်မယ်လို့ ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ မိုးဟေကိုရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကို ဒီနှစ်အတွင်း ကြားရမလား ဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
အနီရောင်January 22, 2010 at 12:54 AMစဉ်းစားကြည့်တာ ဒီလိုကောင်မလေမိူးကိုယူမဲ့သူက ရှိသေးတယ်ဗျာ။ဒီကောင်မကို ယူဖို့ မပြောနဲ့ မင်းသမီးလို့ တောင်အသိအမှတ်တောင်မပြုဘူးဗျာ။အလကားမင်းသမီးမဟုတ်ဘူး။ကြက်မသာသာဘဲရှိတယ်။ReplyDeleteReplieseveNovember 12, 2012 at 1:03 PMExcuse me, pls do not feed back like that. Every one survive their self. if she is your sis, what would you say mr red. Do not waste your time, and y shouldnt tell like this.AnonymousDeleteReplyAnonymousJanuary 22, 2010 at 1:36 AMu r right.. she is prostitute.. that's why she doest care about personality and caught the rich guy.. look at her address. she used to lived in apartment n now she just want to show off her address and say she need some advice from people.. HELOO no.. her is the msg moe hay ko.. u r such the prostitute . with ugly eyes and thick eyebrows.. u migh havealot of hair on ur whole body.. hairy woman..eeeeeeee...ReplyDeleteRepliesKhai PuNovember 3, 2012 at 10:27 AMcome on dude.. grow up .. and make comment without insulting or without your dam dirty thoughtsDeleteReplyAnonymousJanuary 22, 2010 at 1:38 AMku lar ma gyi.. hehehhehee..ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 1:40 AMif people give u the good comments , u wil say heheh hahah woo woo.. if not, u will say people r just get jelous and spare the not sure news...... taw par taw.. yoo nay pyi.. lotaion ma gyi yal...ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 2:27 AMခုတော့ သံလွင်လမ်းရောက်ပြီ ဆိုတော့ လိပ်စာပြပြီး ကြွားချင်ပြီပေါ့... ဟိုအရင်ခြံမရှိတုန်းက ဟော်တယ်မှာပဲ လိုးရှင်းလိမ်းရတာကိုတော့ မေ့ရှာပြီပေါ့.. နိုင်ငံကျော် ပြည့်တန်ဆာ ဆိုတော့လဲ သံလွင်လမ်းလို ခြံကြီးထဲမှာ ထားပြီး လိုးရှင်းလိမ်းပြတာကို ကြည့်မယ်ပေါ့ ကိုညီညီထွန်းရေ.. နွားမကြီး ခြံမခုန်အောင်တော့ ခြံစည်းရိုးကို မြင့်မြင့်ခတ်ထားနော်... ဟားဟား ဟား..ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 3:05 AMဟုတ်ပ ကိုညီညီထွန်းရေ.. မယူခင်တော့ စိတ်ချရအောင် AIDS ရှိမရှိ စစ်သင့်တယ်.. လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ အိပ်တဲ့ ကောင်မ ဆိုတော့ ဒါမျိုးက ရှိတတ်တယ်.. ခင်ဗျားကျေးဇူးနဲ့ ဖာသယ်မကတော့ သံလွင်လမ်းမှာ နေနိုင်ပြီပေါ့.. ဆီးသီးသည် မဗျိုင်းလို ဘဝ မမေ့ဖို့ သူ့ လိုးရှင်း video လေးကို ခဏခဏ ပြပြပေးဗျ... ကျုပ်ဖုန်းထဲ မှာရှိတယ်... လိုချင်ရင်ပြော..ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 3:17 AMhote tay , but she is so sexy modelReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 3:19 AMi want to see her lotion video clip , can u tell me the websiteReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 4:42 AMI hate Moe Hay KoReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 5:52 AMBecause of their bad moves they did, when if they get children; their kids will never dare enough to go out side. whatashame.......!!!ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 6:53 AMIS NOT OWN,RENT HOUSE...HA......HASHE IS NOT SHAME.............ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 7:59 AMi hate moe hay ko. she is not actress. she is just p.... i agree with first commentReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 8:21 AMShe has no shame and no morals. Just get lost.ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 9:30 AMမိုးဟေကိုလို လူမျိုးကိုယူတဲ့ သူကတော့နွားပဲReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 11:52 AMအဲလူကလည်း လူလွတ်မှမဟုတ်တာReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 11:56 AMhota pa ... south shat ma shi tae' kaung ma... thu' ko u tae' lu loud nwar kya tar ma shi buu..ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 2:00 PMMoe Hay Ko , criticism is not funny for you. It point out your bad character and action. If you hear the criticism, you should avoid your sexual action.ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 4:38 PMအဲဒီလူ ရုပ်ကလည်းကြည့်ပါလား... ဘာလာလာဆိုတဲ့ ရုပ်ထဲကပဲ.. အသားကမဲ.. သွားကနီကြောင်ကြောင်... ရိုးရိူး ဖာသည်မတောင်ယူမယ့် လူမျိုး... နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့ မပြော နဲ့တော့ပေါ့ဗျာ...ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 8:14 PMဟုတ်ပါ့ဗျာ..သံလွင်လမ်းဆိုတဲ့ ဝင်ဒါမီယာ နေ၇ာမျိုး က ကြာလေလေ မင်းသမီးလို့နာမည်တပ်ထားတဲ့ကောင်မတော်တော်များများက ဟိုဇာနပုတ်ကနေေ၇ာက်လာပြီး ဖာခံလို၇တာနဲ့နေကြတာ လုပ်၇တဲ့ငနဲတွေကလဲ ဘာကောင်းလို့လဲ့မသိဘူး ဒီလိုခြံမျိူးကိုမှပေး၇တယ်လို့.....မယ်လိုဒီလဲ သံလွင်လမ်းေ၇ာက်နေပြီးဗျာ....မြန်မာပြည်၇ဲ့ဖာသည်မ ဂိုဏ်ချုပ် ဘယ်သူကိုခန့်၇င်ကောင်းမလဲ မဲပေးေ၇ွးကြပါအုံး ....ကြာ၇င်မြန်မာပြည်လဲမလွယ်ဘူး ...ဒီလိုမိန်းမတွေ၇ဲ့ မျိုးဆက်ဟာ...ဗီဇနဲ့ လာတာ....ကြာ၇င်မြန်မာပြည်၇ဲ့ သမီးပျိုတွေ သူတို့၇ဲ အကျင့်စ၇ိုက်ကူးစက်မှာစိုး၇တယ်...ဝေးဝေးကေ၇ှာင်၇ှားသင့်တဲ့သတ္တဝါတကောင်လိုပါပဲ......အမျိုးကောင်းသမီးများ...အတုမယူသင့်တဲ့မိန်းမတွေပါ. ဒီမိန်းမတွေကငွေမက်လို့လုပ်ကြတာပါ....တကယ်တမ်းသေ၇င်သူတို့နောက်ဘာမှမပါဘူးဆိုတာမသိ၇ှာတဲ့ သူတွေပါ.....ခုတောင်အ၇ှင်လတ်လတ် လူတကာနဲ့ဆက်ဆံ၇တဲ့ဒုက္ခ ဝဋ်ခံနေ၇တာကိုအားမကျပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းနှိူးဆော်အပ်ပါတယ်......ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 9:26 PMရေးထားကြတာ ရစရာကို မရှိပါ့လား။ ဘာရေးရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 11:31 PMmoehayko thi bo lo te, thu ko thi aug write pyi po kya par....ReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 11:35 PMmoehayko ko u te so tot,nyinyi tun ka singapore mhar pherkaung lote te htin te nawReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2010 at 11:53 PMdi lo ma pyaw ba nay. thu lay ta na ba daReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 1:39 AMမပြောသင်.ဘူး..အဲလောက်ကြီးနောက်ပြီးမြန်မာအချင်းချင်းနောက်ပြီးဇကော ဆင်နင်းလည်း.ဒီထက် ပိုမပြားနိုင်ဘူးလေ...လူတိုင်းမှာလှေခါးထစ်ရှိတယ်..လှိုင်းတွေရှိတယ်..ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်ပုံစံတွေ မတူကြဘူး..အခြေအနေချင်းမတူကြဘူး.ထို.အတူခံစားချက်တွေလည်း မတူကြဘူး..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်..မြင်းတစ်ကောင်နဲ. သားအဖ နှစ်ယောက်ပုံပြင်ထဲကလိုကိုယ်သည် မြင်းဖြစ်နေလား၊သားအဖ ၂ ယောက်ဖြစ်နေလား..ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်နေလားဆိုတာကိုဘဲခနလေးဘဲ ကိုယ်.ကိုကိုယ် ပြန်တွေးကြည်.လိုက်နော်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...sorry ပါ..ReplyDeleteRepliesEagleNovember 2, 2012 at 1:59 AMThat's true. DeletePhilip MingNovember 5, 2012 at 4:22 AMOf course!! Most people were for getting about themselves such as how is stilling they are situation after if when they see someone falling down moments for somewhere they want to push all of finger themes, it very terrible hobby, than one thinks she is feminine than she can’t respond to you very strongly but what is happening in your opinions than positive or negative so you should decide ....DeleteReplyAnonymousJanuary 23, 2010 at 2:12 AMနင်တို့ကလည်းဘာကြောင့်အဲ့လောက်တောင်ရေးပေးကြတာလည်း.လူဆိုတာအမှားရှိသွားမှ အမှန်ပြန်လာမှာပေါ့သူအခုအိမ်ရပြီဆိုတော့ဟိုအလုပ်ဘယ်လုပ်တော့မှာလည်းသနားပါတယ်...ReplyDeleteဘွန်ဒေါJanuary 23, 2010 at 2:19 AMပြောသင့်တာကတော့ ပြောရမှပေါ့လေ... အဲလို လုပ်စားလို့ အဲလို နေရမှာ နေရပါလားဆိုပြီး နောက်လူတွေ လမ်းမှားလိုက်ကုန်မှာစိုးရတယ်... သမီးပျိုလေးတွေ... ညီမတွေရှိတဲ့လူတွေဆို ပိုစိုးရိမ်မိမှာပဲ... ရုပ်ရှင်လောက က ပျက်နေတာတော့ကြာပါဘီ.. ဒါပေမယ့် အရင်က အဲလောက်မဆိုးကဘူးလေး... ကြလေးပိုဆိုးလေဖြစ်နေတော့.. အဲလုို မင်းသမီးတွေကို အားမပေးသင့်ဘူး.. သူ့အနုပညာ ဘယ်လောက်ှိကောင်းတယ်ပြောပြော.. သူက အစားထိုးလို့မရနိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်မျိုးမဟုတ်တာတော့ အသေအခြာပဲ.... ရိုးသားကြိုးစားနေတဲ့ သူတွေကို ပိုအားပေးသင့်တယ်... ဥပမာ... စိုးပြည့်သဇင်တို့.. မိုးယုစံတို့လိုပေါ့....မှတ်ချက်။ ။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါသည်....ReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 3:27 AMTO ဘွန်ဒေါ Moe yu san ka lu min nae so? A dar hote lar? Lu min hasawife and two kids.ReplyDeletewoffistJanuary 23, 2010 at 5:31 AMBlogger, you should adjust your sense on the comments posted on wall. Whatashame for our nation. Too Much personal and too much humiliation on somebody. Shame on you guys..ReplyDeleteဘွန်ဒေါJanuary 23, 2010 at 5:50 AMအများပြည်သူ အားပေးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်က ပါစင်နယ်တွေပါ... ခင်ညားတို့ပြောစရာမလိုဘူးလို့ ဘယ်ပြောလို့ရပါမလဲ...မင်းသား မင်းသမီးဆိုတာ က ပြည်သူပိုင်လိုပါပဲ.. ပြည်သူအားပေးလို့ သူတို့တွေ ပိုက်ဆံရနေတာကိုး...ထားပါတော့....မိုးယုစံ နဲ့ စိုးပြည်သဇင်တို့ ကတော့ အခုထိ ဘယ်သွားသွား အမေတွေ က လိုက်ပေးနေတုန်းပါပဲ...လူမင်းက မိုးယုစံ အမေကိုပါ အခန်းထဲခေါ်သွားရင်တော့လည်း မပြောတတ်ဖူးပေါ့ဗျာ....ဟီးဟီးReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 6:14 AMကိုညီရေဆီသဘောင်္ပေါ်မှာ ဆီခိုးစုပြီး ဝေပုံကျ ခွဲခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကို မေ့သွားပြီလားဗျာ ။ReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 6:51 AMSHE IS MYANMAR PORN STAR!!!!!!$$$$$$$,,,,,,,,,,,FEC,,FEC,,,FEC,,,,,WELCOME.................OPEN..........................ReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 7:01 AMHi Guys,You are what you write.ReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 11:12 AMအနုပညာရှင်တွေဆိုတဲ့ လူတွေကို တခုတော့ပြောချင်တယ် အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ မကောင်းတဲ့ အရာ လူငယ်လူရွယ်တွေ အတုယူမှားသွားစေနိုင်တဲ့ အရာတွေကိုဆင်ခြင်သင့်တယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေအတွက်ပေ့ါ လင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ယူ၊ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေ ကိုအရှက်မရှိ မလုပ်စေချင်ဘူး။ ငယ်ရွယ်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေ လမ်းမှားရောက်အောင်တွန်းပို့သလို မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ခုတော့မြန်မာနိုင်ငံက အနုပညာရှင်တွေတော်တော်များများက အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်တွေ ကမိမိရဲ့ အနုပညာ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်တာ ထက် အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသား သဌေးတွေကို အပြိုင်အဆိုင်ဖမ်းတာတွေ၊ အနုပညာရှင်အချင်းချင်းရှုပ်တာတွေ လောက်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာ ကနိမ့်ကျသထက်နိမ့်ကျလာတာမဆန်းပါဘူး။ReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 11:19 AMPyaw Dait Lu Myar Kochin Sar Gya Bar . Myanmar lu myo sit yin De lauk Aout Tan ma kya thint pa bu . Myanma lu myo so tar Yinkyay thein mywe thu twe par . Barthar Tayar Shi thu twe so yin aout tan ma kya pa bu . Asint atan ma shi thu twe thar dar myo phaw gya tar par . Myanmarpyi bai ayup hmar nay gya thalai? Sar Nar Gya Bar Naw.ReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 3:10 PMI agree w. wt above said... u r what u write!!! be careful w. ur language u guys >.<ReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 5:05 PMသူတကယ်ဖြစ်နေလို့တကယ်ပြောတာပဲ အောက်တန်းကျတာဘယ်ဟုတ်မှာလဲ သူလိုးရှငိးလူးတဲ့ခွေတွေဒီလောက်ပေါနေတာပဲ ဘယ်မိန်းကလေးကိုများ ကျနော်တို့ဒီလိုပြောတာတွေ့ဘူးကြလို့လဲ မြန်မာဆိုတာယဉ်ကျေးရမယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့်အနုပညာကိုဗန်းပြပြီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်နေတဲ့ ဒီလိုမိန်းမမျိုးကိုတော့ ဒီလိုပြောတာနဲ့ပဲတန်မယ်ထင်ပါတယ် သူကအမျိုးကောင်းသမီးမှမဟုတ်တာပဲ ဒါဟာလွတ်လပ်စွာရေးခွင့်ရှိပါတယ် ကျနော်တို့ကသူ့ကိုဒီစကားနဲ့တန်မယ်ထင်လို့ ဒီစကားနဲ့ပြောတာပါ ကျန်တဲ့သူတွေကမပြောသင့်ဘူးထင်ရင်မပြောရုံပါပဲ သူ့တစ်ယောက်ကိုဒီလိုဝေဘန်မှ ကျန်တဲ့သူတွေဒီလိုလိုက်မလုပ်ကြမှာပေါ့ဗျာ ပတ်ပတ်စက်စက်ကိုဝေဘန်သင့်ပါတယ်ReplyDeleteဘွန်ဒေါJanuary 23, 2010 at 5:24 PMတစ်ချို့တစ်ချို့ တွေက ဒီလိုလေးပြောစေချင်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့.... မိုးဟေကိုလေး သနားပါတယ်နော် သူ့ခမျာ သံလွင်လမ်းမှာ အိမ်နဲ့ခြံနဲ့ နေချင်ရှာလို့ ဟိုလူနဲ့လိုက်အိပ်.. ဒီလူနဲ့လိုက်အိပ်လုပ်နေကြရရှာတယ်... ဘယ်သူက တော့ ၀ါသနာပါလို့ သူများ ပိုက်ဆံယူပြီး အဆက်အဆံခံချင်ရှာမလဲနော်... ဒီလို ကိုယ်တုံးလုံးချွတ် ပြီး လိုးရှင်းတွေလူမှ မြန်မြန်အောင်မြင်မှာပေါ့လို့... သူခညာ သနားပါတယ်.. အဟင့်.. ရွှတ်.. ဖတ်.. (နှပ်ညစ်သံ)ReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 7:35 PMသူ့လည်းသူ့ဘ၀ကိုဘယ်အဖြစ်ခံချင်ပါ့မလည်း..ဒါပေမယ့်လူဆိုတာအတိတ်ကံကိုမမြင်ရဘူးလေ...သူအရင်ဘ၀က ၀ဠ်ကြွေးပါလာလို့ဒီဘ၀မှာသူမဖြစ်ချင်တဲ့ဘ၀မျိူးဖြစ်ရတာနေမှာပါ..သူငယ်ချင်းတို့က သူ့ရဲ့မကောင်းကွက်တွေကို လွတ်လပ်စွာဝေဖန်နိုင်ပါတယ်..ဒါပေမယ့်အပြူသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုမျိူးပဲကောင်းပါတယ်နော်..ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကနောက်ဘ၀မဆိုင်းကိုယ့်မိသားစုမှာဝဠ်လိုက်တတ်တယ်ဆိုတာ သိစေချင်တယ်....မိုးဟေကိုဘက်လိုက်ပြောပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်..အပြစ်တွေဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ..............ReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 7:48 PMသူမသိလို့မှားခဲ့တာတွေလို့မြင်မိပါတယ်..သိနေရင်တော့သူဘယ်မှားပါ့မလည်းနော်...........သူ့ဘ၀ရပ်တည်ချက်အတွက်ဘ၀ပေးအခြေနေအရ သူမှားခဲ့တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်.......ReplyDeleteAnonymousJanuary 23, 2010 at 11:11 PMအားလုံးမှန်တယ်။ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာငါမသီဘူး။ငါပဲမှားနေတယ်ထင်တယ်၊ငါသောက်တာများသွားပြိ:ထင်တယ်။ငါနဲနဲမူးနေပြိ:ထင်တယ်။ အားလုံးကိုလေးစားတယ်။ အာကြိ:ReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 2:07 AMwell she's not all that ad he's not that grade either.ReplyDeleteamyJanuary 24, 2010 at 9:56 AMAung mya lay. Moe hey ko gaedi lo gyi lar .Shatt po ah yan khaung de naw. hook lar everyone?ReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 11:18 AMmoe kay ko ca tu location video hwet pee tar taung ma sin chin pal bat paw tar tway kyar pyut tat style tway loet pya nay tar/pyaw tar taung nal tay/i laldlo r shat tate khar ma shi tat girl so ma like bu/tu boyfri lal tu ko bal lout twal ma lal see lat/ma htin bu/r yin ca celebrity tway lo pal bat kyi yin htar khat mar/i pyaw tar ma rude par bu/ma yone yin see lat/ok lar/bal tu ma tu yat ma kg tat dan ko khan nan mar ma hoet bu/i knowReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 4:13 PMTo all anonymous who write burglish, pls use english or myanmar font. very difficult to read burglish. as long as we use burglish, can't improve international language english or burmese.ReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 4:41 PMဟေု့ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေလို့ပိုပြီးဝေဖန် တားမြစ်ဖို့ အားလုံးသောမြန်မာတွေမှာတာဝန်၇ှိတယ် အေး..ညီမတွေ အမတွေ သမီး၇ှိတဲ့သူတွေလည်း သတိထားသင့်တယ်...အခုဟာကအင်တာနက်ခေတ်နဲ့ အညီ အတုမြင်အတက်သင်ဖြစ်နေကြတာ..၇ုပ်၇ှင်လောကမင်းသမီးတွေကဒါမျိူလုပ်ပြနေတော့ လူငယ်တွေအတုခိုး၇င်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ......ဥပမာဝတ်တာစားတာပဲကြည့်ဗျာ သူတို့ဝတ်တာလိုက်ဝတ်ချင်တဲ့မိန်းကလေးက ၁ဝဝ မှာ ၁ဝဝပဲ မိဘချမ်းသာတဲ့သူတွေကဝယ်ဝတ်ချင်၇င်ဝယ်ဝတ်နိုင်ပင်မဲ့ ပိုက်ဆံမ၇ှိတဲ့သူတွေက ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဖြတ်လမ်းနည်းပဲလိုက်ကျမှာပေါ့ ....ပျက်စီးနေတဲ့မြန်မာမတွေခုဆိုမနည်းတော့ဘူး .လူဆိုတာသူများကိုမ၇ှက်၇င်တောင် ကိုယ့်ကို ကို ၇ှက်သင့်တယ် အ၇ှက်၇ှိမှအကြောက်၇ှိတယ် ကိုယ့် ကို ကိုတန်းဖိုးထားမှ သူများကတန်ဖိုးထားမှာပေါ့ မိဘမျက်နှာအိုးမဲသုတ်တာနဲ့ အတူတူပဲ ဒါမျိူမဖြစ်အောင်မိဘလုပ်သူကလဲဆုံးမသင့်တယ်ထင်တယ်....မိ၇ိုးဖလာတစ်လင်တစ်မယားဆိုတာတကယ်မ၇ှိတော့ဘူးလား တကယ်လိုကျွန်တော်တို့တွေလဲ မိဘနေ၇ာေ၇ာက်လာ၇င် သားသမီးတွေ ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆုံးမ၇မလဲဆိုတာကြိုတင်စီစဉ်ထားသင့်တယ်....ကိုယ်တိုင်လဲစံအညီနေသင့်တယ်...အကျင့်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုလဲ အားလုံးသိအောင် လူအသိုင်းအဝိုင်းမှာမ၇ှိအောင်လုပ်သင့်တယ်ထင်တယ် အနုပညာ၇ှင်ဆိုတာ အားလုံး၇ဲစံဖြစ်နေ၇မှာ အဲဒီလိုမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေနဲ့ ကျော်ကြားသူကို အားမပေးသင့်ဘူးထင်တယ်...အားပေးသူဟာလဲ အဆိပ်ပင်ေ၇လောင်းနေတာနဲ့ အတူတူပဲထင်တယ်....ReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 6:49 PMI agree above comment.ReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 7:42 PMကိုညီညီက အဲလောက်ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်ကရသွားတာလဲ။ ပြောကြပါဦးReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 8:00 PMJanuary 21, 2010 12:05 PM ..ka yay kae dae ako gyi laramar gyi lar..Jouk Pyaw mel...a sa ka dod ma pyaw chin par wo..But AIDS so dae Words lay ko se lite loe parr..AIDS...soo dar...shoke ma yar ma hote wo...(ANYWAY 90%) lOUT KA de loo ti dar pop...REMEMBER NGa tone ...EVERYONE IS AT RISK ...:) Nwarrrr..Knowledge ka lae ma shi ..pyaw ka lae pyaw chin tay del..ReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 8:04 PMdar pop....BoGyoke Aung San Pyaw kae da loo..Phar Naing Kan gyi pyit nay pyi shint.....I Agree with the comment from aboveReplyDeleteunit-xJanuary 24, 2010 at 8:14 PMဘယ်သူဘာပြောပြော ဘာလုပ်လုပ် သူ့ ဘ၀ ကို သူကြောင်းတာပါ အတုခိုးမှား မှာ စိုးရင် ကို့ မျိုးဆက်ကို ပညာပေးထားပေါ့ တပါးသူဘ၀ ကို အဆိုးရွားဆုံး ပုတ်ခတ် တာ က တော့ မကောင်းပါဘူး သူဘာလုပ်လုပ် သူ့ စရိတ်နဲ့ သူ ပါသူ့ စိုက်တဲ့ အပင် သူ ရိတ်ရမှာ ပါ ဘာလို့ ဘေး ကနေ လျှောက်ပြောနေကြလဲ မသိဘူး အဲဒီလို ပြောမဲ့ အစား ကို အလုပ်ကို အချိန်ပိုပေးလိုက်ရင်တောင်အကျိုးရှိမယ် အခုကျွန်တော်ဝင်ရေးတာတော် နဲနဲ အချိန်ပုပ်သွားပြီ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေဒီလို အတင်းအဖျင်းတွေနဲ့ အချိန်မကုန် စေချင်ဘူးဗျာ မျိုးဆက် လိုက် အများ ကြီး ပြင်မှ နောက်မျိုးဆက်တွေ အနာဂတ်ကောင်းမှာ ပါ ကျွန်တော်ကတော့ လူများ လို အမည်မသိမလုပ်ထား ဘူး ကို ပြောတာ ကို တာဝန်ယူရဲ ပါတယ်ReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 8:15 PMလူတွေကပြောတတ်ကျတယ်...မိုးဟေကို...မိုးဟေကိုတဲ့...ပြီးတော့လဲ သူအကြောင်းမပါဘဲ ပါးစပ်အရသာခံင်္ပြီးမမျိုဆို့ နိုင်ရှာဘုူး...လဒ တွေရဲ့ ReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 9:03 PMTo... unit-Xမှန်လိုက်တာ အဲလိုစိတ်ထားမျိုးလေး လူတိုင်းမှာထားတတ်ရင် တကယ်ကိုတိုးတက်မှာပါ...(လေးစားပါတယ်)ReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 9:41 PMmoehayko akyaung write yin thu ko pae write kya pop.achin achin bar lo write ny kya tr lae..myanmar twe atin ma pyaw say chin yin, atinn twe write te comment ko bar lo read thay lae...ReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 9:46 PMkg tr so tr kyite tr write par...sayargyi lo tot pyaw ma ny par ne..wathanar tuu lo de website mha comment write kya tr pop,ma hote bu larReplyDeleteAnonymousJanuary 24, 2010 at 10:33 PMu are burmese,but u can't read bugnish,are u bo lann nee larReplyDeleteAnonymousJanuary 25, 2010 at 6:27 AMthat,s good I want to tell you alittle my friend everyone can say about this, but you don,t need to think it. not so bad you action my my friend I like you action , so can you continue more?ReplyDeleteAnonymousJanuary 25, 2010 at 9:39 AMMan... why so bad.. its her life their life.. why so mean to them show love.. :) it does not matter what she become should blame to those who make it happen.. especially the government. Coz of them there arealot of girls that becoming like that. Sponsor its one main thing in model life. :(ReplyDeleteTHJanuary 25, 2010 at 1:15 PMမိုးဟေကိုဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့အမေပေးတာလို့သိရတယ်။သူ့အမေကရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်ခဲ့တာ။သူမအောင်မြင်ခဲ့တာကိုသူ့သမီးကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံပဲ။ကောင်မလေးကမိဘကိုတော်တော်အလေးထားတယ်နဲ့တူတယ်။တောင်ဥကလာဇာတိ။သူငယ်ငယ်လေးနဲ့အိမ်ထောင်ကြခဲ့ပုံပဲ။ကိုးကန့်လား၊၀လား၊အသေအချာတော့မသိဘူး။ချမ်းသာတယ်။မော်ဒယ်ဘ၀မှာတွေ့တာ။တရုတ်ပြည်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပုံပဲ။ဟိုမှာအဆင်မပြေအခက်အခဲရှိလို့ဖြစ်မယ်။မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီးအနုပညာပြန်လုပ်ခဲ့တာ။ReplyDeleteAnonymousJanuary 25, 2010 at 3:54 PMPlease don't talk so much bad things of others even these are correct. You should think about your mother, or sister before you talk.Every person got different life, life is full of struggle.If you think, it is not acceptable, you avoid yourself, If you think it is good , then you accept, thats all.ReplyDeleteAnonymousJanuary 25, 2010 at 7:12 PMသြော်..တိုင်းသိ ပြည်သိ မဟုတ်ပဲ ပျက်စီးနေကြတာတွေ အများကြီးပဲလေ...ဒီလို တစ်ဖက်လူကို ၀ိုင်းပြောမယ့်အစား ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အားလုံးကို မောင် နှမချင်းစာနာပြီး ကူညီကြရင် မကောင်းဖူးလား...။ReplyDeleteAnonymousJanuary 25, 2010 at 10:36 PMဘာလို့ ဒီမှာ အတိုက်အခံလုပ်နေကြတာလဲ ....အေးဆေးပေ့ါ...အပြန်အလှန်စာေ၇းပြီး၇န်ဖြစ်နေကြတော့ အကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့...လူဆိုတာအမှားမှန်သိပင်မဲ့လုပ်ချင်တဲ့လူက၇ှိပြီးသား...အဲဒီတော့ အပြစ်ပြောနေလို့လဲ မိုးဟေကိုတစ်ယောက်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူလို့ပဲသဘောထားလိုက်ကြပါလို့ အကြံပေးချင်တယ် သူအကျိူးနဲ့အကြောင်းပဲသဘောထားကြပါ..နေတက်၇င်ကျေနပ်စ၇ာပါ...ReplyDeleteAnonymousJanuary 25, 2010 at 10:49 PMမြန်မာနိုင်ငံ၇ဲ့ ၇ုပ်၇ှင်မင်းသမီးတွေအဲဒီလောက်တောင်အောက်တန်းကျလာတာ အံသြမိတယ်အ၇မ်းပဲ....သူတို့လုပ်ပုံတွေကြား၇တာ၇ှက်စ၇ာကောင်းတယ်...သူတို့ကြောင့် တကယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့ မိန်းခလေးတွေသိက္ခာကျတယ်ထင်တယ်....ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲတွေလို့အထင်မခံနိုင်ဘူး..အဲဒီအတွက်ဒီလိုလူကို ကောင်းကောင်းဆုံးမသင့်တယ်...အခုဒီဝက်ဆိုဒ်ကသတင်းမှန်သမျှ သူတို့မကောင်းသတင်းကခပ်များများ၇ယ်......ဘာများကောင်းသေးလဲ တော်ကြာသူတို့ကို အားကျပြီးမင်းသမီးလုပ်ချင်နေမှဖြင့်...မတွေး၇ဲစ၇ာ....ကြား၇သမျှမထင်၇က်စ၇ာပဲ....ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲမသိဘူးနော်ွReplyDeleteAnonymousJanuary 26, 2010 at 3:35 AMi agree with *unit-x * :DReplyDeleteAnonymousJanuary 26, 2010 at 6:21 AMThu Pitsee Nal Thu khan sar tar pae, lut lut lat lat lote par say.ReplyDeleteAnonymousJanuary 26, 2010 at 4:20 PMshe should ban to star in Myanmar movies, MHK, if u like to be rich or whatever, do pros, don`t use the name actressReplyDeleteAnonymousJanuary 26, 2010 at 9:33 PM"u nit -X " u r sutpid ,i think soReplyDeleteunit-xJanuary 28, 2010 at 7:47 PMhaha if u think me stupid why don't u show ur name? damn ;) it's obivious who's stupid and dare not to show ID.ReplyDeleteAnonymousFebruary 1, 2010 at 2:31 PMdon't be proud unit-x... it is ur name? u r not different with anonymous.ReplyDeleteAnonymousFebruary 6, 2010 at 4:18 AMဘာတွေညာတွေ လျှောက်ပြောမနေနဲ့ ဘယ်ကောင်မဆို ရရင်တော့ ၀ါးမှာပဲ ... ငါလဲ ရရင် ၀ါးချင်တယ် ( မြေပဲလှော်) ဟီးဟီးReplyDeleteရေခဲFebruary 22, 2010 at 12:30 PM၀ါးချင်ရင် သွားဝါးလေ ..မိုးဟေကို အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမှာ မိဘမေတ္တာဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ထားတယ်၊ ၀ါးပြီးရင်တော့ .. ပိုက်ဆံရှင်းခဲ့ReplyDeleteTuan Thang leh Deih LianMay 7, 2010 at 3:14 AMZing Mang Dawi tawhaki kawm khawm hi mai lo ding maw Su zuak Nu Good day.ReplyDeletesawJuly 4, 2010 at 8:14 PMသူမကောင်းဘူးလို့ ပြောကြတယ်ဘာလို့ အကျင့်မကောင်းတဲ့ လူကို မင်းသမီးအဖြစ် လက်ခံလဲလို့ ဝေဖန်ကြတဲ့ မြန်မာပြည်ဟာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ တဲ့ နိုင်ငံလို့ ပြောကျတယ်အတွင်းကျကျလေ့လာကြည့်လိုက်ရင် ဖာနိုင်ငံပဲအုပ်ချုပ်တဲ့ သူကိုက ဖာကောင်းပဲဟာ....ဒီလိုပြောလို့ လူတစ်ချို့ စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ် ..သင်စိတ်ဆိုးပြီးရင် သင့်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီး လေ့လာစေချင်တယ်ReplyDeletePhilip MingNovember 5, 2012 at 4:25 AMOf course!! Most people were for getting about themselves such as how is stilling they are situation after if when they see someone falling down moments for somewhere they want to push all of finger themes, it very terrible hobby, than one thinks she is feminine than she can’t respond to you very strongly but what is Of course!! Most people were for getting about themselves such as how is stilling they are situation after if when they see someone falling down moments for somewhere they want to push all of finger themes, it very terrible hobby, than one thinks she is feminine than she can’t respond to you very strongly but what is happening in your opinions than positive or negative…… in your opinions than positive or negative……ReplyDeleteKoko SawNovember 7, 2012 at 10:40 PMhaaaaaaaaaaaa dont talk bad things about her. She is still ok whatever she may have done. May be she was lied. Dont heap blame on her. Ohhhhhhhhhhhhh my poor MHKReplyDeleteming mingNovember 10, 2012 at 6:30 AMI want this guy .LOLReplyDeleteming mingNovember 10, 2012 at 6:33 AMI want knowledge for this guy than i Cr... LOL.... ReplyDeletekyawsoelin linNovember 11, 2012 at 6:01 AMအားပေးတဲ့သူတွေအများကြီးဘဲ ကောင်းတာကောဆိုးတာကော မိုးဟေကို၇ဲ့ စန်းကကျန်သေးပါတယ်ကောင်းတာကောဆိုးတာ ကောစိတ်မ၀င်းစားမှာကိုသာစိုး၇င်း၇တာ မကောင်းပြော၇င်းလဲစိတ်ဝင်းစားမှု၇ှိသေးတဲံ့ အတွက်ဂုဏ်ယူထိုက်ပါတယ်ReplyDeleteyoon eiNovember 11, 2012 at 12:46 PMသူ့ကိုပြောထားကြတာရစရာတောင်ငမရှိ်ပါ့လား သူကလည်းရစရာမှမရှိဘဲဗျာ အဲ့ဒီလိုvideoရိုက်ပြီးမရှက်ဘဲ နာမည်ကြီးသွားလို့ပျော်နေတယ်တဲ့ဗျာ အဲ့လိုရိုက်တာဘယ်သူမှသူကိုကိုင်လို့ရတာမဟုတ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဗျာ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး ဘယ်လောက်ကျက် သ ရေယုတ်တဲ့မိန်းမလဲဆိုတာReplyDeleteLearn EnglishNovember 18, 2012 at 11:16 PMShe said she bought the house from which she got the money that fromacareer in acting, not from nyi nyi tun. I don't think she can buyasort of expensive house by herself but nobody know the truth...ReplyDeleteathenswinJanuary 9, 2013 at 11:43 AMShe is justaBurmese Kim Kardashian.ReplyDeleteAdd commentLoad more...